बालबालिकालाई कब्जियत भए के गर्ने ? – Etajakhabar
बालबालिकालाई कब्जियत भए के गर्ने ?
डा.विनिता जोशी, बालरोग विशेषज्ञ, नर्भिक अस्पताल
दुई वर्ष नाघेपछि स्कूले उमेरका बालबालिकामा कब्जियतको समस्या ज्यादा देखिन्छ । शहरीक्षेत्रमा २ वर्ष पुग्नासाथ बालबालिकालाई स्कूल पठाउने चलन छ । त्यो उमेरसम्म बालबालिकामा नियमित समयमा शौचालय जाने बानीको विकास भइसकेको हुँदैन । स्कूल जानासाथ उसको वातावरण परिवर्तन हुन्छ । अर्कोतर्फ हरेकजसो घरमा कामकाजी अभिभावक भएकाले फुर्सद नहुँदा बालबालिकालाई घरमा शौचालयको बानी विकास गराउन सकिएको हुँदैन । अर्कोतर्फ बालबालिका ७/८ वर्षको भएपछि अभिभावकहरूले उनीहरूको हेरचाहबारे कम ध्यान दिन थाल्छन् जसले बालबालिकाको दिसा गर्ने बानीलाई नियमित बनाउन सक्दैन । यसमा बच्चाले मलाई कब्जियत भयो भन्ने महसुस नै गर्न पाउँदैन ।
स्कूलको नयाँ वातावरण, शिक्षकहरूसँग घुलमिल नहुने भएकाले स्कूलको शौचालयमा दिसा गर्ने बानी बालबालिकामा बसिसकेको हुदैन । फर्केर घरमा आएर फेरि शौचालय जान बिर्सन्छन् । यही चक्रका कारण बच्चा बेलामै कब्जियतको समस्या सुरु हुन्छ । एक हप्तासम्म पनि शौचालय नजाने, गएपनि नियमित नगर्ने, शौचालय बस्दा कन्ने, २÷३ दिनमा एकपटक शौचालय जाने जस्ता आदत देखा पर्छन् । दिसा बस्दा कन्ने बालबालिकालाई पनि कब्जियत भएको मानिन्छ । २ देखि ४ वर्षका बालबालिकाहरू शौचालय जान नमान्ने, रुने, कुनामा गएर उभिने लक्षण देखा पर्छन् । कालान्तरमा उनीहरूमा पेट दुख्ने, पेट फुल्ने लगायतका समस्या देखिन्छन् ।
सागपात नखाने, पानी कम खाने पाका मानिसहरूलाई मात्रै होइन, कलिला बालबालिकामा शौचालयको नियमित बानी हुन नसक्दा देखिने कब्जियतको समस्या विकराल बन्दैछ । शहरका बालबालिकामा जंकफुड बढी खाने, पर्याप्त व्यायाम नहुने लगायतका बानी छ । नियमित शौचालय नगई दिसा रोक्ने बानी पर्दै गएपछि कब्जियत हुन थाल्छ । लामो समय कब्जियत रहिरह्यो भने पेट दुख्ने समस्या सुरु हुन्छ । लामो समय आन्द्रामा दिसा संकलन भइरह्यो भने बालबालिकालाई खाना नरुच्ने, खाना खाएपछि वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, खाना नखाएकाले तौल घट्दै जाने हुन्छ । कब्जियत लामो समयसम्म रहेमा उनीहरूले बल गरेर दिसा गर्नुपर्ने भएकाले दिसामा रगत जाने र ठुलोआन्द्राभित्र मासु पलाउने खतरा रहन्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
जव बालबालिकाहरू आफै शौचालय जान थाल्छन, हामीले उसलाई सकेसम्म घरमै नियमित समयमा शौचालय जाने बानी बसाउनुपर्छ । स्कूल जाने बालबालिकालाई विहान बरु १५ मिनेट छिटो उठाएर भए पनि शौचालय पठाउनुपर्छ । यसबाट उनीहरूले असहज महसुस गर्ने स्कूलको शौचालयमा जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । बिहान शौचालय जाने बानी भएमा कब्जियत हुने सम्भावना निकै घट्छ । जंकफुड खान नदिने, सागसब्जी र फलफूलमा जोड दिनुपर्छ । यसले कब्जियत भइसकेकाहरूलाई पनि सहयोग गर्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २४, २०७३ समय: ७:३५:३७